#Sri-lanka:Masjid Iyo Goobo Ganacsi Oo Ku Yaalla oo ay leyihiin Muslimin Oo La Weeraray - Get Latest News From Horn of Africa
By WARIYAHA CAALAMKA On Apr 22, 2019 Last updated Apr 22, 2019
Kadib, qaraxyadii silsiladaha ahaa ee shalay ruxay dalkaasi ayaa waxaa la soo werinayaa in xalay Bambooyin lagu weeraray Masjid ku yaalla W/galbeed ee dalka Sri Lanka, waxaana dab la qabadsiiyey 2 Dukaan oo ay Ganacsato Muslimiin ah ku lahaayeen Galbeedka dalkaasi.
Dowladda Sri Lanka weli kama aysan hadlin, mana jiraan dad loo soo qabtay weerarka bamka ee lala beegsaday Masjidka iyo goobaha Ganacsi ee la gubay.
Weerarka ka dhanka ah Muslimiinta ku nool dalkaasi ayaa ku soo beegmay iyadoo ay Golaha Muslimiinta Sri Lanka ee (The Muslim Council of Sri Lanka) cambaareeyeen qaraxyadii shalay lala beegsaday Kaiisadaha iyo Hoteelladda ku yaalla dalkaasi.
Goluhu waxay sheegeen in qaraxyadaasi lagu dilay dad aan waxba galabsanin, isla markaana ay Kooxo rabshado wada geysteen qaraxyadaasi, kuwaasi oo doonaya in lagu kala qeybsamo Diin ahaan iyo dadka laga tirada badan yahay.
Wararka kale ee naga soo garaayo dalkaasi waxay sheegayaan in saakayto la qaaday Bandowgii shalay lagu soo rogay caasimadda dalkaasi ee Kolombo.
Boliska ayaa la sheegay inay wadaan hawlgalo lagu xiray dadka Muslimiinta oo ay ku eedeynayaan qaraxyadii shalay lala beegsaday Kaniisado iyo hoteelo, oo ay ku geeriyoodeen 290-qof, kuna dhaawacmaan 500 oo kale.
Dhinaca kale, Waaxda Arrimaha Dibedda ee dalka Maraykanka ayaa soo saartay digniin ku aadan weerar iyo qaraxyo mar kale ka dhaca dalka Sri Lanka.
Digniinta waxaa lagu shegay inay suurtogal tahay in weeraro iyo qaraxyo lala beegsado goobaha Dalxiiska, Gaadiidka, Dhismayaasha laga dukaamaysto, Hoteelladda, Kaniisadaha, Garoomadda Diyaaradaha iyo deegaanadda kale ee ay dadweynaha.
Qaraxyadii shalay lala beegsaday Kaniisado iyo Hoteelo casri ah ayaa la sheegayy in dadka lagu dilay ay ku jireen 36 qof oo Shisheeye ah, iyadoo 9 kalena la la’ yahay.
Ajaaniibta ku geeriyootay qaraxyadaasi waxay ka soo kala jeedaan dalal ay ka mid yihiin Maraykanka, Britain, Shiinaha, Australia, Holland, Turkiga, Hindiya iyo Portuqiiska.